Yakachipa Kukanda yendarira fekitori nevatengesi | Ouzhan
Brass isiri-ferrous simbi kufa-kukanda-tsika chaiyo ndarira kufa-kukanda zvikamu
Mumaimbi endarira, manganese ndarira, aluminium ndarira, silicon ndarira, lead ndarira, nezvimwe zvinoumbwa nekuwedzera zvimwe zvinokonzeresa zvinhu. Mhangura maalloys asina zinc sechinhu chikuru chakabatana zvinonzi ndarira, senge tin bronze, aluminium bronze, lead bronze, uye beryllium bronze. Mune muyero wenyika, pane mhando gumi nemapfumbamwe dzesimbi dzesimbi, kusanganisira makumi maviri neshanu. Kukanda mhangura chiwanikwa rudzi rwekukanda chiwanikwa zvinhu zvinowanzoshandiswa muindasitiri. Mhangura-yakavakirwa alloys anoshandiswa zvakanyanya mukuvaka ngarava uye makemikari maindasitiri nekuda kwavo kwakanaka kutu kurwisa kumvura nyowani, mvura yegungwa uye mamwe makemikari mhinduro. Nekuda kweiyo yakanaka yekupisa mafambiro uye kupfeka kuramba, mhangura-yakavakirwa maalloys anowanzo shandiswa mukugadzira kwekutsvedza mabhusingi kune akasiyana michina inotakura inorema inorema uye inomhanya-inomhanya inotenderera miseve.
Zvakanakira zvendarira zvisina-ferrous simbi kufa kukanda:
OEM yakagadziriswa yendarira isiri-simbi simbi kufa-kukanda sevhisi-China Shanghai ndarira isiri-simbi simbi kufa-kukanda zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nevatengi zvinodiwa, yakakwira-yakanyatsoita ndarira kufa-kukanda ine yakagadzikana uye yakavimbika mhando inogona kugadziriswa. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuve nechokwadi chakakwana kugadzira kwendarira kufa-kukanda michina zvikamu. Uye zvakare, izvo zvendarira zvinofa-zvekurasa zvigadzirwa zvakapihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye zvinogona kushandiswa mune akasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa anokwikwidzana mutengo masevhisi endarira kufa-vachikanda zvikamu kune vedu vanokosheswa vatengi.
Ndezvipi zvinoshandiswa nendarira kufa-vachikanda zvikamu
Zvakanakira Ouzhan Brass Die Kukanda Service
- Zvese zvigadzirwa ndarira zvinofa-zvekurasa zvigadzirwa zvinoenderana nekuomarara kwemhando yekutarisa.
- Sekureva kwemadhirowa kana masampuli ekugadzira chaiyo ndarira kufa-kukanda zvikamu.
Pashure: OEM simbi isina simbi yekushandura zvikamu maitiro
Zvadaro: Yakasarudzika yendarira kufa kukanda zvikamu